တန်ရာကိုပြော တန်ရာကိုဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တန်ရာကိုပြော တန်ရာကိုဆို
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Aug 18, 2011 in Copy/Paste | 27 comments
သမ္မတကြီးက ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လာခွင့်ဘာညာ
စုံလိုက်သမှ စုံစုံ စုံစုံ နဲ့ အင်တာနက်ကြီး ဘန်းသွားမှာတောင်ဆိုးရိမ်နေရ
စုံလွန်းလို့ ငရုပ်ဆုံ ကအဘခေါ်ရလောက်အောင် ကိုစုံတာ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မလွှတ်ပေးဘဲနဲ့ ဒါဟာယုံကြည်နိုင်စရာမရှိဘူး
ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ သံရုံးတွေကနေ
ကြေငြာချက်ဒေ ဘာဒေ ထုပ်ပြန်ပြီး ပေါ့ဗျာ ဘာညာသာရကာပေါ့
တော်သေးပြီး ပြောရရင်တော့ ကျုပ်ပင်ပန်းတယ်
ကျုပ်က ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်ရင် လေတောင်ချွန်တာမဟုတ်ဘူး
ဒီလောက်စုံတဲ့ အကြောင်းတွေထည်းမှာ တစ်ခုသောအကြောင်းတစ်ခုက
လူတွေများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မတန်ရာကြံစည် အထင်ကြီးပုံ
တတိယနိုင်ငံလို့ဆိုတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့်
ရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကို ကျုပ် မေးစမ်းပါရစေဗျာ
ဘာဖြစ်လို့ မေးရတာလည်းဆိုတော့ ဒီအချိန်မှာ
အဲ့သည်ကလူတွေက ပိုပြီးများ အာပိုပြဲနေကြသလားလို့(အထင်ပါ)
ခင်ဗျားတို့အထင်မှာ ယ္ခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ ပြန်လာနိုင်တယ်ဘာတယ်ဆိုတာ
ခင်ဗျားတို့ကို ပြောတယ်လို့များ ခင်ဗျားတို့ ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးမိကြတယ်နော
ခင်ဗျားတို့ ယ္ခုလက်ရှိနေရာတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးနဲ့ ရှိနေလို့
အထူးသဖြင့် ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ယ္ခုလက်ရှိ ထိပ်ပြောင်သမ္မတကြီးက
ရပ်တည်ဘို့ တော်တော်ခက်ခဲနေတယ်လို့ ထင်နေကြသလား
ခင်ဗျားတို့ အဲ့သည်မှာရှိနေတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း
ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရှိနေတဲ့ သိန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့ ဘာတဲ့
ဒုက္ခသည်တွေလို့ဆိုမလား အဲ့သည်လူတွေကို ရည်ညွှန်းလိုက်တယ်လို့
ခင်ဗျားတို့ နည်းနည်းလေးမှ အနည်းငယ်လေး မတွေးကြည့်မိဘူးလား
အဲ့သည်လူတွေကြောင့် ထိပ်ပြောင်အစိုးရကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေနေသလဲ
ဒါ့ကြောင့် ထိပ်ပြောင်အစိုးရက ဒီလူတွေကို ဘယ်လို ကြံစည်နေသလဲ
ဒါနဲ့စကားမစပ် ခင်ဗျားတို့ရော တော်တော်လေးစုမိဆောင်းမိကြပြီလား
မသာကာ ပြည်တော်ပြန်ဆိုပြီး ဟိုမှာ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ကလေးတွေကို
ရွှေပြမျိုးပြ လာပြန်ပြ ပြီးရင် ကလေးတွေက သူတို့နေခဲ့ဘူးတဲ့ ဒေသစကား
အများအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားကို မွတ်နေအောင်ပြောတတ်ကြတာကို
အင်းအင်းအင်း ဆက်ပြောရရင်တော့ လက်သီးပွဲတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
ယ္ခု သမ္မတကြီးပြောတဲ့ ပြန်လာလို့ရပါတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကိုပြောတာမဟုတ်သလို
ဘယ်သူယုံယုံ မယုံယုံ ကျုပ်ယုံတယ်
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်နဲ့တန်ရာကို ဟောင်ကြ ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့
( တိုင်းပြည်တွက် တစ်ကယ်လုပ်နေတဲ့ ပြည်ပရောက် အနည်းငယ်မျှသော သူရဲကောင်းတွေရယ်
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု့ကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရယ်ဟာ
များစွာကုန်သော အချောင်ခို သမားများကြောင့် ………………………….)
ဒါ ကျုပ် တော်တော်ဖေးဖေးမမလေး ပြောထားတယ်နော်
ကိုရင် ပု သိပ်မှန်တာတွေ အရမ်းပြောတတ် လွန်းတယ် … ဖြတ်ကနဲပေါ်တာ ကို ဆတ်ကနဲ ရေးတတ် တယ် ..လွှတ် ပြီးတော်တာပဲ။
ကျုပ်လည်း ကိုရင့်ပို့စ်ကို ကြိုက်မိပါရဲ့
ကျုပ်လည်း ရေးချင်ပေမယ့် ကျုပ်အသက်က အစိုးရတစ်ဆက်စာပဲ ရှိတော့ ကိုရင့်လိုတော့ သိပ်မသိဘူးဗျ
လွန်တာရှိက ၀န်တာမိပါ၏ …
ကိုကြီး..အကြီးကြီး ကိုအောင်ပု…ထပ်တူဗျာ.. ကျူ့ပ်ငယ်သေးလိူ.မပြောချင်ပေမယ်. ပြောချင်တာ ဒီစကားပဲ ။ နိုင်ငံရေးလုပ်စားတဲ.သူတွေကို တွေ.ဖူးသလို(မျောက်ပြဆန်တောင်းပေါ.နော.)။ တကယ်လုပ်နေတဲ. သူတွေလဲရှိကြပါတယ်(တကယ်) ။ အများစုကတော. နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံကြေးကိုမက်နေကြနေလေ၇ဲ.။ ဒါကြောင်. ဗမာပြည် ဘာမှဖြစ်မလာတာ ။ ကျွန်သာသာနေ၇တဲ. နိုင်ငံသားတွေလေ..ဗျ..။ ကျူပ်က မဟုတ်ရင်မခံ ..
ကျူပ်လည်း နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေးဆိုပြီး ကိုယ့်တစ်ဘို့ပဲကြည့်တဲ့သူတွေကို
ကျူပ် လောလောဆယ်ခေတ်မှာ လူဆိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်။ တစ်ခုသတိထားမိတာက ရွာထဲမှ နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးရင် ရွာသူတွေ ဘာကြောင်.မပါရတာလဲ..။ သူကြီးက ကန်.သတ်ထားလို.လား..အသိစိတ်မ၇ှိလို.လား..ကြောက်နေကြလို.လား..။ အမြင်မရှိကြလို.လား။။ ဒါ ကျူပ်တို. တိုင်ပြည်အရေးလေဗျာ..။ ဒီမိုကရေစီ ကျင်.သုံးတဲ. ကျူပ်တို.ရွာမှာ ဖြစ်သင်.ပါတယ်ဗျ။….။
” ရွာထဲမှ နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးရင် ရွာသူတွေ ဘာကြောင်.မပါရတာလဲ ”
ရွာသူများ လက်ဝှေ့ထိုးသင်တန်း တက်နေတုန်းဖြစ်ပါ၍ မပါရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း ဆင်းပြီးလျှင် အကြောင်းကြားပါမည့်အကြောင်း…………… ;)
ရွာသူတွေ မပါဆို နိုင်ငံရေး အကြောင်း ဂဃနဏမှ နားမလည်တာ … ကိုယ်တွေ မွေးပြီး လမ်းလျှောက်တတ်ယုံပဲရှိသေးတယ် ….. အရေးခင်းဖြစ်တာကိုး … ။
မဆလ ခေတ်တို့ .. မဆလာခေတ်တွေလည်း မသိဘူး … နာမည်ရှေ့ ဗိုလ်တပ်ခေါ်လိုက် … သခင်တပ်ခေါ်လိုက် … အရှင်ကြီးတွေ ၊ သခင်ကြီးတွေ ခေတ် … လုံးဝ လုံး ၀ မမှီလိုက်ဘူး ။
သိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ … ဘဘကြီးတို့ကျောင်းကိုလာလျှင် လက်အုပ်ချီရမယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီလေ …
:-) :-) :-) ကိုရင်ပုရယ်ရယ်
ဟား ဟား ဟား သွေးထွက်အောင်မှန်သဗျာ။ အများစုသော သူရဲကောင်းများကတော့ အင်းစိန်တောရကျောင်းထဲမှာပေါ့ဗျာ။ ဒေါ်လာတွေမက်ပြီး အပြင်ကနေ ဟောင်ဟောင်နေတဲ့သူများကို အထဲလေးလည်းတစ်ခေါက်လောက်ပြန်လာကြည့်ကြပါဦးလို့ ။(အမှန်တကယ်လုပ်နေသူများကို လုံးဝမဆိုလိုပါ။)
နိမှသောင် နောင်မှသိ တဲ့..
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ နောက်မှ သိကြရမှာ…
ခုတော့……..သို့လော သို့လော ပေါ့လေ…..
There are3types of Myanmar people living abroad,
(1) real refugees living in neighboring countries ( Thai, Bangladesh, India ).
(2) people who got political asylum or refugee visa in developed country.
(3) well educated & rich people who live in developed country.
If I were President U Thein Sein,
For type (1) = they are generally poor & uneducated, but, they are Myanmar, I feel pity for them. If they want to come back, President U Thein Sein will not reject. Our country can use their hard labor.
For type (2) = In majority, they are also poor & uneducated, they are also Myanmar, but, they are dangerous. They may unsettle the recent political situation. As far as possible, he ( President U Thein Sein ) would not want to allow them.
For type (3) = they are well educated & some are very very rich. They may carry not only the knowledge & technology, but also capital ( wealth/money). Our country need them so so much. They are essential. He will invite them very warmly.
This is barely imagination on behalf of President U Thein Sein.
But, there is one thing to consider.
Those type (3) people can return to Myanmar at any time freely.
They didn’t come back, because, they didn’t want to.
Real decision maker is themselves, not government.
If you want them to stay in Myanmar,
you only need to ease some regulation, make fair, competitive & transparent ground.
So, it is unnecessary to invite again & again to those type (3) people.
Then, who else did our president invite ???
I am confused ?????
” ခင်ဗျားတို့လည်း လယ်ပြန်ထွန်မဲ့သတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ဘယ်သူယုံယုံ မယုံယုံ ကျုပ်ယုံတယ် “
ဟေ့ကောင်အောင်ဘု၊ မင်းထန်းရည်အဝမသောက်ရတိုင်း သမတဂျီးကို ပေါက်ကရ မပြောနဲ့။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေနဲ့ စက်ရုပ်နွားအကောင်တသိန်းဝယ်ဖို့ ရုရှားနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားပြီ။ လယ်သမားက အဲယားကွန်းခန်းထဲမှာ အိုင်ပက်ဒ်တက်ဘလက်ကွန်ပြူတာနဲ့ ဂိမ်းဆော့ အင်တာနက်တက်ရင်း စက်ထွန်နေရုံပဲ။ အဲဒီကြမှ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ အဘရယ် လယ်ထွန်ဖို့ စက်နွားတရှဉ်းပေးပါဆိုရင် မင်းလိုကောင်မျိုး လားတရှဉ်းပဲရမယ်။ :mad:
ခင်ဦးသာ Thursday, 18 August 2011 18:33 .
ပြည်တော်ပြန်ရန် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောဆိုသော်လည်း ခိုင်မာသည့် အာမခံချက် တစုံတရာ မရှိသောကြောင့် အိမ်ပြန်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးဟု ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများက ဆိုကြသည်။
ဦးသိန်းစိန်၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ ပါဝင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့သစ်၏ မူဝါဒကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရန် အချိန်အတန်ကြာယူရဖွယ်ရှိကြောင်း ABSDF ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးတွင် ထိပ်တန်းတာဝန် ယူခဲ့ဖူးသူ ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
“အရပ်သား အစိုးရ လက်ထက်မှာစတဲ့ ခြေလှမ်းသစ်တခုလို့ ဆိုရမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားသူတွေနဲ့ လုပ်နေရတာ ဆိုတော့ (သမ္မတအတွက်) လွယ်ကူတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဦးအောင်နိုင်ဦးက ဆိုသည်။
အတိုက်အခံများ ပြည်တွင်းပြန်ဝင်ရေးကို နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ကမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြစ်မှု တစုံတရာ ကျူးလွန်ထားတာ မရှိဘူး ဆိုရင် အချိန်မရွေး ပြန်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်း စားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ပြစ်မှု ကျူးလွန်ထားသည့်တိုင် ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံဖို့ ပြန်လာမယ် ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ သဘောထားကြီးစွာ စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟူသော ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောကြားချက်ကို ကြာသပတေးနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဤသို့သော် ကမ်းလှမ်းချက်မျိုးကို ကြေညာချက်၊ ဥပဒေများဖြင့် ရေးသား ထုတ်ပြန်သင့်သည်ဟု အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်တင်ညိုက ပြောသည်။
“ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံတွေကို တကယ်ပြန်ခေါ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ် ဆိုရင် လေးလေးနက်နက် လုပ်စေချင်တယ်၊ တိကျတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်တာမျိုး၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူညီမှု ရစေနိုင်တာမျိုးပေါ့။ အခုဟာက ယုံကြည်လောက်တဲ့ အနေအထား မရှိဘူး” ဟု ချင်းမိုင်မြို့တွင် နေထိုင်သူ ဒေါ်တင်တင်ညိုက ဆိုသည်။
အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လာမည့်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မည်ဟု စီစဉ်ထားသူမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် လူရွှင်တော် ဂေါ်ဇီလာ ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ အနုပညာသမားတွေက ပြည်ပမှာထက် ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ရတာက ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်၊ မြန်မာပြည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းပဲ အတွင်းကပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ” ဟု လူရွှင်တော် ဂေါ်ဇီလာက ဆိုသည်။
အစိုးရ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများက သံသယရှိနေကြခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော တိုင်းရင်းသားဒေသ ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းမှု မပြုခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကာတွန်းဆရာ ဟန်လေးက ပြောသည်။
“အနီးကလူတွေနဲ့တောင် ပြေလည်အောင် မညှိနှိုင်းနိုင်သေးဘဲ အဝေးကို ကမ်းလှမ်းတာ စဉ်းစားစရာပါ” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသူ ကာတွန်းဆရာ ဟန်လေးက သုံးသပ်ပြသည်။
ပြည်ပရောက် အင်အားစုများအား အစိုးရက ထိုသို့ ကမ်းလှမ်းနေသော်လည်း ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအားစုများနှင့် မည်သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဆိုသည်ကို ရှင်းပြခြင်း မရှိသေးပေ။
နေပြည်တော်တွင် သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရွှေက “ဘယ်သူမဆို ပြန်လာဖို့၊ အပြစ်တွေ ရှိရင်ခွင့် လွှတ်ပေးမယ် ပြောတယ်၊ အာမခံချက် အတိအကျ ပေးမထားပေမယ့် အားလုံးနဲ့ အပြုသဘော ဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးပြီးတော့ နိုင်ငံ တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက် သမ္မတက ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသည် တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံထက် များစွာ နိမ့်ကျခဲ့သော်လည်း ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံထက်များစွာ တိုးတက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် ဆင်းရဲ ကျပ်တည်းနေရကြောင်း သမ္မတက ပြောကြားသည်ဟု အစိုးရထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ ငြိမ်းချမ်းရေး ရလိုပါက သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် အစိုးရများနှင့် စေ့စပ် ဆွေးနွေးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် လူအများအပြား ဒေသစွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသည့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် လာမည့်နှစ်အတွင်း ရိက္ခာ စပါး မလုံလောက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးသည့် ဒေသများတွင်လည်း ရိက္ခာ စပါး ခက်ခဲမည်ကို အထူးစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သမ္မတက ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တူသည့်အရာ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ပြီး မတူညီသည့် ကိစ္စများကို ခွဲခြားလုပ်ဆောင်မည် ဟုလည်း သမ္မတက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်မတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်
အထဲမှာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ပြီး မိသားစုနဲ့အလှမ်းဝေးနေသူတွေ များတယ်
နိုင်ငံရေးကြောင့်အကျဉ်းကျပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့ တချို့လူတွေက ဒေါ်စုကိုအားကိုးတယ်တဲ့
တွေးကြည့်တော့လည်း သူတို့အထဲရောက်တော့ ဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်မလဲနော
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ သားသ္မီးတွေပညာရေးအတွက် အလှူငွေတွေထောက်ပံ့ပါတယ်
ပြောသာပြောရတာ ကိုကြောင်ကြီးတို့ သဂျီးတို့ အမျိုးတွေလည်း
နှစ်ပေါင်းများစွာလည်း ကိုယ်က ခံခဲ့ရပြီးပြီ
ဒီလိုပြောလိုက်တာဟာ လမ်းကြောင်းလွှဲ အာရုံလွှဲတွေရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား
အကြောင်းတစ်ခုကို အပြန်အလှန် တွေးတောသုံးသပ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့
ကိုယ်ပြောတာမှ မှန်မယ်လို့တော့ ဘယ်ဆိုလိုမလဲ
ကျုပ်ကတော့ အကြံဖန်လုပ်ပြီး လစ်သွားတဲ့ကောင်တွေကို တော်တော်များများသိထားတယ်
နောက်ဆုံး ဘာပြဿနာမှ မတွေ့လို့ကတော့
ခွေးမသားတွေကို လဲပြီးတဲ့အမှု့နဲ့ကို ဖမ်းမယ်
ဦးဦးပု ပြောတာတွေကမှန်နေသလား…. ဘယ်သူတွေပြောတာတွေ မှန်နေသလဲ… တိတော့ဝူး။ နားလည် လည်ဘူး။ ဖတ်တော့ ဖတ်လိုက်တာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေအတွက် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန် ၀မ်းသာမိပါကြောင်း…..
ဦးအောင်ပု ရေးပြမှဘဲ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုဆိုလိုမှန်းသဘောပေါက်တော့တယ်။
ကျွန်မတို့ကလည်း နိူင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ်ရင် အကောင်လိုက်ပြမှအရိပ်မြင်တာဆိုတော့ ဘာမှဝင်မမန့်တော့ဘူး။ ဖတ်လို့ကောင်းကြောင်းဘဲ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။:B
ဒါဟာလည်းဂေဇတ်ရဲ့ ပကတိရိုးသားတဲ့ အရသာဘဲနေမယ်….
ဦးနှောက်ပြောင်သမ္မတမဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ၊ဟုတ်လားအောင်ပု
ကိုအောင်ပုကြီး ရေးခဲ့သမျှထဲ ဒီပို့စ်ကို အကြိုက်ဆုံးပါ……….
မှန်ပါ့ကိုအောင်ပုရယ်…။ ကိုအောင်ပုမှန်တာရေးတာ ၂ခါရှိသွားပြီ။ ကျနော်ဖတ်လိုက်ရတာပြောတာနော်…။
မနေ့က kai ရေးထားတဲ့ ဟိုမိန်းမတွေ ဟိုလူတွေ ပြောတာ ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ခိုးလို.ခုလု ခံစားရတယ်။ ဦးသိန်းစိန်က သူတို.ကိုပြန်လာချင်ရင် ပြန်လာလို့ ရတယ်လို့ ပြောတာ။ ပြန်မလာချင်ရင်လည်းပြန်မလာလို့ရတယ်။ ဒါကိုများ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ရဦးမယ်ဆိုသေးတယ်။ ဟိုတနေ့ က ဘယ်သူရေးထားတာလဲမသိဘူး.။ ၀မရှိဘဲ ၀ီလုပ်ချင်နေကြတယ်ဆိုတာလေ။ အဲ ..အတိုင်းဘဲ။ သူတို.ကလည်း တသက်လုံး ပြန်လာမဲ့ ရုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို.ဟာသူတို့ဟိုမှာအဆင်ပြေနေပြီးသားဘဲ။ ပြန်ချင်တဲ့သူတွေကို မပြန်ချင်အောင် လုပ်နေသလိုဘဲ။
ခွေးမသားတွေကို (လဲပြီး)တဲ့အမှု့နဲ့ကို ဖမ်းမယ် ။
ဒီအမူ့ကတော့ ပြစ်ဒဏ် ကြီးကြီး ပေးမှရမယ်နော်။
ရွာသူတွေကို ၀င်ရောက်မဆွေးနွေးချင်တဲ့ သဘောမဟုတ်ပါဘူး …. etone ပြောသလိုပဲ ကိုယ်လည်း မွေးရော အရေးခင်းကဖြစ်နေပြီလေ ။ အရှေ့ဇာတ်ကြောင်းလည်း သိပ်မသိလိုက်ရ .. အနောက်ဇာတ်ကြောင်းလည်း သေချာ နားမလည်နဲ့ ချာလပတ်လည် ရမ်းနေလို့ … လူကြီးတွေ ရေးထားတာကိုပဲ ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ ယူနေရတဲ့ ဘ၀လေးတွေပါ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက လွဲရင် ကျန်တာတွေ ဘာမှလည်း သိပ်မမှတ်မိပါဘူး … ဒါ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံခြင်းပါ ။ ဗိုလ်ချုပ် တယောက်ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိပါတယ် ကျန်တဲ့သူတွေတော့ ချုပ်ခြင်တာချုပ် ဘာမှကို မသိတော့ပါဘူးးးး ။